China Hammer Drill 26MM BHD 2630 ifektri kanye nabaphakeli | Amathuluzi weBenyu
Amandla wokufaka: 800W
Isivinini Esingalayishi: 0-1450 / iminithi
Izinga Lomthelela: 0-5900 / iminithi
Umthelela wamandla: 2.8J
Drilling umthamo: Ukhonkolo 26mm
Ngabe udinga i-hammer drill ekwazi ukuphatha ukwakhiwa kwamatshe, amatshe noma ukhonkolo? Ngemuva kwalokho uthole impendulo evela eBENYU ngokusebenza okumangazayo kokuqina, okuqinile okuqina kwesando sokuzivivinya!
Ama-hammer wokuzivocavoca asetshenziswa kakhulu ekubhoneni nasekubhowweni kwesando & ekukhanyeni okukhanyayo kukhonkolo, usimende, udonga lwezitini netshe ngokusebenza kahle kakhulu, imbobo enkulu, ukujula kokumba okude.
Idizayinelwe izinhlelo zokusebenza ezinzima kunazo zonke, i-BENYU hammer drill inesikhathi eside sokubhola kwe -hammer kunamanye amathuluzi asesigabeni sayo. Kubuye kube lula ukusebenzisa nokugwema ukukhathala komsebenzisi. Ngomshini onamandla, ihambisa ijubane lokubhola eliphakeme ne-torque enkulu. I-clutch yemishini ivikela imotor lapho i-bit ibopha, futhi ukusebenza kwemodi eningi kunikela ngokusebenza okuhlukahlukene okukhulu.
SDS-PLUS, Light-weight, Hammer drill, Electric pick, Electric drill, COMPACT STRUCTURE, DIY, Industrial, Impact drilll, Ukhonkolo
I-800W motor enamandla ivumelana nokusebenza okunzima
Iqhubu elilodwa elinemisebenzi emi-3, Ukubhola / ukubopha iHammer / Hammering, kuthuthukisa ukusebenza kahle
Idizayini yokuqinisa i-SDS, ukubambelela okusheshayo nokulula.
Iswishi yokulawula isivinini se-elekthronikhi, lungisa ijubane ngokuya ngesidingo
Phambili / inkinobho ebuyela emuva, phambili / emuva ngokukhululekile
Isistimu yokupholisa umoya esebenza kahle futhi ehlakaniphile, inweba kahle impilo yemoto.
I-clutch egcwele ngokweqile inikeza ukuvikelwa okusebenzayo kubasebenzisi lapho i-bit ibopha
Igeji yokujula enembile, lawula ngokunembile ukujula kokumba kwemigodi engaboni, okwenza ukusebenza kuqonde kakhulu.
Isibambo esithambile se-Antiskid, sikhululekile ukusebenzisa
Isibambo sokusiza esijikelezayo esingu-360 °, sihlangabezana nezidingo ezahlukahlukene kalula
Amabhithi we-SDS-Plus Drill (uma uthanda)
I-SDS-Plus Chisels (kuyakhetheka)
I-adaptha (uma uthanda)
Langaphambilini Isando Drill 24MM BHD 2413
Olandelayo: Isando Drill 28MM BHD 2810
I-Corded Hammer Drill
Ukudiliza Isando Drill
Isando Drill Chisel
Isando Drill Ukuze Ukhonkolo
Isando sokujikeleza esisindayo esinzima 32mm BRH 3216
Ukudilizwa Isando Bdh0815
Isando seRotary 40mm Brh4002
Isando Drill 20MM BHD2011